बेलायतमा उर्वर बन्दै नेपाली कला साहित्य | Ratopati
personनरेन्द्र बस्नेत exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १, २०७६ chat_bubble_outline0
लन्डन । नेपाली कला साहित्यका लागि उर्वर भूमि बनिरहेको छ बेलायत । साहित्यिक सङ्घसंस्था खुल्ने क्रम जारी छ, साहित्यिक गतिविधि बढेका छन् । कृति प्रकाशनको शृङ्खला निरन्तर छ । अचेल यहाँ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन र अवार्ड वितरण कार्यक्रम पनि बढेका छन् ।
‘म राजदूतका रूपमा मात्र होइन, एक स्रष्टा र साहित्यानुरागी व्यक्तिका रूपमा पनि बेलायतको नेपाली डायस्पोरासँग सामीप्यमा छु’– बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुबसु क्षेत्री) भन्छन्, ‘नेपाल र नेपालीको परिचय, पहिचान एवं प्रतिष्ठा बढाउने प्राज्ञिक, बौद्धिक, साहित्यिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा सदैव संलग्न र सहभागी हुन पाउँदा ज्यादै हर्षित छु ।’
बेलायतमा नेपाली समाजलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन नेपाली भाषा, कला साहित्य, सङ्गीत, संस्कार र संस्कृति एवं पर्व र परम्पराहरूको संरक्षण, संवद्र्धन अपरिहार्य रहेको उनी बताउँछन् ।
नेपाली राजदूतावासले बेलायतको नेपाली समाजसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट भाषिक, साहित्यिक, साङ्गीतिक, सांस्कृतिक र कलाका क्षेत्रमा पुनर्जागरण ल्याउन प्रयत्नशील रहेको पनि राजदूत डा. सुवेदीले बताए ।
पछिल्लो समय बेलायती परिवेशमा नेपाली कला साहित्य निकै मौलाउँदै गएको छ । नेपाली कला, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिन बेलायतवासी नेपालीको भूमिका पनि अग्रणी छ । बेलायतको सबैभन्दा पुरानो नेपाली साहित्यिक संस्थाका रूपमा परिचित नेपाली साहित्य विकास परिषद् यूकेले नेपाली साहित्यलाई अनवरत मलजल गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा परिषद् स्थापना भएपछि साहित्यिक गतिविधिले तीव्रता पायो । पछि अन्य विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरू प्रवासी नेपाली साहित्य समाज, अनेसास यूके, नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायत, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज यूके च्याप्टर, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ बेलायत, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली वाङ्मय प्रतिष्ठान यूके, साहित्य चौतारी यूके, नेपाली मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायत, भोजपुर प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायत, विश्व साहित्य मञ्च स्विडेन लगायतका साहित्यिक संस्थाहरू यस कार्यमा क्रियाशील छन् ।
उल्लेखित संस्थाहरूले बेलायतका विभिन्न सहरमा पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम, कविता गोष्ठी, गजल तथा मुक्तक वाचन, सेमिनार, मोती, भानु जयन्ती कार्यक्रम, कृति प्रकाशन जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
तमुधिं यूकेले लन्डनमा बर्सेनि गर्ने नेपाली मेला पनि नेपाली कला संस्कृति विश्वसामु चिनाउने एउटा प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइन्छ । त्यहाँ प्रस्तुत गरिने विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीले मिनी नेपालकै झल्को दिँदै आएको छ ।
नेपाली साहित्यिक विकास परिषद् बेलायत यसै वर्ष २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा रजत जयन्ती मनाउने तयारीमा छ । परिषद्का अध्यक्ष कोमल मल्ल श्रेष्ठ नेपाली साहित्यलाई निरन्तरता दिन बेलायतमा हरेक वर्ष लक्ष्मी जयन्ती, भानु जयन्ती, साहित्य सन्ध्या, पुस्तक विमोचन तथा सय वर्ष पुगेका साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै आएको बताउँछन् ।
‘परिषद्ले साहित्यकारहरूलाई थप कदर र हौसला प्रदान गर्न एक लाखदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न पदक वितरण गर्दै आएको छ’, श्रेष्ठले थपे, ‘यदि कसैलाई समस्या परेर मेडल फिर्ता गरे मेडलको रकम बराबर नगद दिने व्यवस्था पनि हाम्रो छ ।’
परिषद्को रजत जयन्तीका अवसरमा नेपालबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रणा गरिसकिएको र उक्त समारोहमा विभिन्न १०५ जनालाई सम्मान तथा अवार्ड वितरण गरिने पनि अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।
रजत जयन्तीकै अवसर पारेर परिषद्ले ‘लालीगुराँस’ स्मारिका पनि प्रकाशित गर्ने भएको छ ।
बेलायतमा साहित्यिक गतिविधि मात्र होइन, नेपालबाट लोकप्रिय कलाकर्मी र साहित्य स्रष्टाहरूका लागि समेत बेलायत पहिलो रोजाइ बन्दै आएको छ । महिनै पिच्छे स्रष्टाहरू बेलायतमा भेटिनु अहिले नौलो होइन् ।
‘सगरमाथाको गहिराइ’बाट चर्चित बनेका युवा कवि नवराज पराजुलीको एकल वाचनमा लन्डनमा दुई पटक ‘कविता कन्सर्ट’ हुनुलाई पनि साहित्यतर्फको आकर्षणका रूपमा लिइएको छ ।
परिषद्का पदेन संरक्षकसमेत रहेका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत तथा वरिष्ठ साहित्यकार दुबसु क्षेत्री बेलायतमा नेपाली साहित्यलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन प्रयत्नरत छन् ।
उनी बेलायतमा राजदूतको रूपमा आएदेखि नै नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा दूतावासका तर्फबाट थप ऊर्जा प्रदान गरिएको साहित्यकारहरू बताउँछन् । नेपाली दूतावासले गत वर्ष मात्र बेलायतका करिब डेढ सय साहित्यकारहरूको कविता सङ्ग्रहसमेत प्रकाशित गरेको थियो ।
वास्तवमै साहित्य र कला क्षेत्रमा बेलायत निकै धनी छ । किरण प्रधानद्वारा निर्देशित नेपाली चलचित्र कस्तुरीदेखि सनमकुमार बैरागद्वारा निर्देशित पछिल्लो चलचित्र कैदीको पत्रसम्म आइपुग्दा करिब एक दर्जन जति नेपाली चलचित्र निर्माण भइसकेका छन् । ह्याप्पी डेज, पासवर्ड, लिलिबिली, एटिन, यूटर्न, गोर्खा बिनिथ द ब्रेभरी आदि चलचित्र बेलायतमै बनाइएका हुन् । नेपालबाट गुणस्तरीय फिल्म बेलायत ल्याएर प्रदर्शन गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ ।
बेलायतमा नियमित रूपमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्दै आएको नेप्लिज इन्टरटेनमेन्ट यूकेका बिरेन खड्का प्रवासका दर्शकलाई समेत उत्कृष्ट नेपाली फिल्म देखाउने आफूहरूको उद्देश्य रहेको बताउँछन् ।
उक्त संस्थाले अहिले बेलायतका विभिन्न सहरमा ‘६ माया छपक्कै’ देखाइरहेको छ । ‘कवड्डी कवड्डी’पछि ‘शुभलभ’ र ‘मारुनी’ फिल्म पनि प्रदर्शनको पर्खाइमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज बेलायत (इनास यूके) र प्रतिभा नक्षत्रले पनि बेलायतमा नेपाली कला संस्कृति जगेर्नामा इँटा थप्ने काम गरिरहेका छन् ।
सन् १९९५ देखि नै नेपाली कलाकारहरूलाई बेलायतमा ल्याएर नेपालीपनको आभाष दिलाउन गायक तथा डीजे सपन कुमार राईद्वारा सञ्चालित सपन इन्टरटेनमेन्ट्स लिमिटेडको पनि उत्तिकै भूमिका छ ।
राईले यूकेमा बर्सेनि नृत्य प्रतियोगिता गर्दै आएका छन् । उनकै प्रतियोगिताबाट जसिता गुरुङ र धिरज मगर नायक नायिका भइसकेका छ ।
नेपाल आइडल, भ्वाइस अफ नेपाल जस्ता राष्ट्रिय स्तरका गायन प्रतियोगिताका विजेताहरू पनि बेलायत आएर आफ्नो ‘परफर्मेन्स’ दिने क्रम नियमित छ । कोसेली सांस्कृतिक परिवार यूकेको पनि नेपाली कला संस्कृति जगेर्नामा उत्तिकै योगदान छ । उसले ससाना बालबालिकालाई नृत्य र नेपाली भाषासमेत सिकाउदै आएको छ ।
रङ्गकर्मी सनमकुमार बैरागले समयदृश्य, जिगीषा, भानुभक्त र भीमसेन थापा जस्ता नाटक मञ्चन गरेर बेलायतमा नेपाली नाट्य क्षेत्रको छुट्टै अस्तित्व कायम गरेका छन् ।
संसारको जुनसुकै भागमा रहे पनि आफ्नो मौलिकता र नेपालीपन कहिल्यै नभुल्न अग्रजहरूको जोड छ । ‘सैयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भनेजस्तै बेलायतमा अनेक जातजाति, वर्ग, धर्म र क्षेत्रका मानिस रहे पनि नेपालीपन र नेपालीमन अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् राजदूत डा. सुवेदी ।
‘धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता, नेपाली संस्कृति, परम्परा अनि साहित्य र कला नै हाम्रो मौलिक परिचय हो’, राजदूतले थपे, ‘आफ्नो मौलिकतालाई निरन्तरता दिन सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्छ । नेपाल नै नरहे हामी कहाँ नेपाली भन्न पाउँछौँ ? रहुँला हामी नेपाली कहाँ नेपालै नरहे... ।